ကောင်းကင်ကို: နန်းအချ ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ 
ကိုယ့်မြို့ ကိုယ် အိန်ဂျယ်လ်တပါးနဲ့ တင်စားမယ်ဆိုရင်တောင်
အပြင်ပန်းတွေပြောပြီး လုပ်စားနေတဲ့မြို့ မှာ
အရှေ့ တောင်အာရှရဲ့ မာနမင်းသားဟောင်းဟာ
နအဖ ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့ လက်သီးပြင်းနဲ့ 
တစစ ပိုစုတ်သွားအောင် ဖျက်ဆီးခြင်း ခံနေရတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရင်ဝမှာ နားကိုကပ်
အလုပ်လက်မဲ့ ပွဲစားတွေရဲ့ လေရောင်းသံတွေ
မီးလာတုန်းမှာ အလုအယက် ရေမောင်းသံတွေ
ကုန်းအော်နေတဲ့ စပါယ်ယာတွေရဲ့ ရွှေစောင်းသံတွေ
ရုံးပေါ်က ကယ်ပါတွေရဲ့ ငွေတောင်းသံတွေနဲ့ 
Posted by Kaung Kin Ko at 10:49 AM
ဗမာပြည်မှာ အဲသည်ဧည့်စာရင်းတိုင်တဲ့ အလုပ်ကြီး
Perfect Ko Kaung Kin Ko.
ရေးထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကိုရာ။ ရန်ကုန်ရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေပုံတွေ ထင်းခနဲပဲ။ ရေတွင်းတူးလို့မရတဲ့နေရာတွေကျတော့ ဂျိုးဖြူပိုက်တို့ဘာတို့လို အစိုးရရဲ့ရေဖြန့်ပေးတာတွေနဲ့ပဲ သုံးရတာ။ မီးကပြတ် ရေကမလာနဲ့... တော်တော် ကသီလင်တနိုင်တယ်။
ကျနော်လဲ ရန်ကုန်အကြောင်း တပုဒ်ရေးဖူးတယ်...
ကိုမိုးလှိုင်ညဆီမှာ ရန်ကုန်ကဗျာတွေ စုစည်းမှုရှိတယ်...
ကောင်းတယ်ဗျို့....။ ကဗျာလေးကို ခိုက်တယ်..။
နန်းအချခံခဲ့ရတဲ့မြို့။ ခေါင်းစဉ်လေးကိုက အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်။ ရန်ကုန်က နန်းကျခဲ့ပေမယ့် အိမ်နိမ့်စံတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပြန်ရှင်သန်လာပါလိမ့်မယ်။ လှဆဲရန်ကုန်ဟာ ထာဝရလှပဆဲပါပဲ။ လူသန့်သွားတော့ ပိုတောင်လှသေး။
ရင်နင့်စရာတွေ တပုံကြီးနဲ့ မြို့...
တိုင်းပြည် ရင်မအေး။ ။
လေးစားသွားပြီ... ကွက်တိပဲ .. လန်းတယ် ထိတယ် ..
စီဘောက်စ် မရှိလို့ ဒီမှာ အော်ခဲ့တယ်နော်။
အကိုရေ လင့်ခ်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ....
ရန်ကုန်ကို ရင်ခုန်မ်ိတယ်၊လူဝင်စားတွေ များလာပြီ။ မြို.တော်ကို ရွှေထီးဆောင်ကြစို့....
နန်းကျမြို့တော်ရဲ့ အသံစုံတွေ နားဆင်သွားတယ်ဗျာ
ရန်ကုန်ရဲ့ အသံတွေက ရေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာ ဆိုပါတော့...
စိုင်းထီးဆိုင်ကို နှိုးပြီး ရန်ကုန်မှာသာတဲ့လ ကိုပြန်ဆိုခိုင်းရင် အခြေအနေတွေ ကိုက်မလားဘဲ "နန်းအချ ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ " က ရန်ကုန်သူတွေ စိုင်းထီးဆိုင်ပြောခဲ့သလို ထည်ဝါတဲ့ လျှပ်မီးတွေရဲ့အောက်မှာ မာနတွေကြီးနိုင်သေးရဲ့ လားလို့ ပါ။
သိပ်ကို ထိတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ ၈ လေးလုံးရက်မှာ ကောင်းကင်ကိုက ဘာတွေများသီကြူးလေမလဲလို့ 
၀င် ကြည့်တော့ ရင်ကိုထိပြန်ရော။ ၈၈၈၈ ကြောင့် များ "နန်းအချ ခံခဲ့ရတဲ့ မြို့ " ဖြစ်ခဲ့ရလေသလား
Inn,, good poem ... keep good work up. dont waste time at teashop or beer stall or blah blah blahh ...
looking forward to read more poems ..
ကဗျာက အားမာန်အပြည့်..စကားလုံးတွေက အဓိပ္ပါယ်အပြည့်ပဲ..အားပေးလျှက်ပါအစ်ကို။
Realistic! Very good poem.
Google earth မှာကြည့်တော့ ရန်ကုန်က
သူငယ်ချင်းတွေ ကို ဒီခံစားချက်လေး မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံးမယ် ....
ဒါမျိုးတွေ မဖတ်ရကြာပေါ့လို့ ညည်းတော့မလို့ လုပ်တုန်း…
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးဗျာ
တစ်ကယ်ကို ထိထိမိမိ ပုံဖော်သွားတယ်ဗျို့
ရောက်တယ် မောင်လေး မောင်လေးကဗျာတွေ က
စကားလုံးသုံးတာတွေ သိတ်ကောင်းပြီး အဆင့်မြင့်မြင့်ရေးထားတာတွေ့ တဲ့အတွက် ကဗျာ လောက အတွက် သိက္ခါ မြှင့်စေတာလေးတွေပါပဲ
အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကောင်းကင် ရေ.. အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်။သြော်အကိုရေးတဲ. ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုကျွန်တော်.ဘလော.မှာပို.စ်လုပ်ထားတယ်နော်။
ခုခေတ်က အိမ်ကိုဧည့်သည်လာရင် အိမ်ရှင် အဖမ်းခံရတဲ့ ခေတ်မဟုတ်ပါလားဗျာ။
တွေးတတ်တဲ့ အတွေးကောင်းလေးကို ရွှေချသိမ်းထားချင်တယ်
ဝေး မိုက်တယ်ဗျို့ အားပေးသွားတယ်
အကို ရေ စာသားလေးတွေလွန်းလို
ကျွှန်တော် facebook မှာတင်ချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ရတယ်ညီ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှယ်လို့ ရပါတယ်း-) ကျေးဇူး
ကောင်းလိုက်တဲ့ကဗျာ ထိတယ်ဗျို. ....
1988 Documentary (Videos)